INGCIBI YEKHITSHI YEKHITSHI (IZIMBO ZOMNYANGO KUNYE NOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Ingcibi yeKhitshi yeKhitshi (Izimbo zoMnyango kunye noYilo)
Ingcibi yeKhitshi yeKhitshi (Izimbo zoMnyango kunye noYilo)
Eli ligalari yethu yeekhabhathi zekhitshi elinobuchwephesha kubandakanya iindlela ezahlukeneyo zomnyango kunye noyilo.
Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi lwekhitshi ngumtshato wendlela yokusebenza. Ulandela ngokungqongqo umthetho-siseko, into eluncedo kufuneka ibe nokubaluleka ngaphezulu kokuhonjiswa. Xa sisiva ngeekhitshi zesitayile soMsebenzi, sihlala sinxulumana ngokuthe ngqo kunye nemisebenzi emihle yeenkuni kunye nekhabhathi eyenziwe kakuhle engabonakali nje kuphela kodwa iyasebenza kakhulu.
Isitayile seNgcibi savela eNgilane ngenxa yentshukumo edumileyo yoBugcisa kunye nezoBugcisa. Umbutho wezobuGcisa nobuGcisa yayiyintshukumo yamazwe ngamazwe ejolise ekuphakamiseni ubugcisa bemveli kunye nohlengahlengiso loyilo kunye nokuhombisa. Ngeli xesha, ifanitshala yayinobunzima obuninzi obuveliswa kusetyenziswa oomatshini kwimizi-mveliso. Yiyo loo nto ibangela ukwehla kwemigangatho yoyilo ngokwempahla kunye nomgangatho. Endaweni yokusebenzisa izinto zendalo, kwaziswa izinto ezingezizo, endaweni yokubambelela kwiinkcukacha ezenziwe ngesandla, imveliso yefenitshala yasuswa kwiindlela zesiko.
Isimbo seGcisa sazalwa njengempendulo ngokuchasene nobunewunewu obuhonjiswe ngobuninzi kunye nefenitshala yexesha leVictorian. Eyona njongo yayo ibikukubeka ukusebenza ngaphezulu kwayo yonke enye into. Xa kuthelekiswa ne-flamboyance kunye neenkcukacha ezihonjisiweyo zoyilo oluphefumlelweyo lweVictorian, isitayile seGcisa sagxininisa kakhulu kubulula kwaye saqaqambisa ubugcisa. Ngokubanzi, a Ingcibi yoyilo lwekhitshi isitayile sichazwa yimigaqo emithathu esisiseko, uyilo oluthe tye olunemigca ecocekileyo, ulwakhiwo olukumgangatho ophezulu kunye nokuhonjiswa okuncinci. Ngaphandle kokusebenzisa ngokwendalo, isitayile seengcibi saba yenye yezona zinto zibalaseleyo ekuyileni izimbo kwimbali.
Isitayile soMenzi weKhitshi yoyilo lweeKhabhinethi
Uhlobo lweGcisa Ikhitshi leMinyango yeKhabhinethi
Iingcibi zeKhitshi kwiKhitshi eMhlophe
Ingcibi yekhitshi yeKhompyutha (Iintlobo kunye nokugqiba)
Apha ngezantsi siphonononga ezinye zeempawu eziphambili zoyilo lobugcisa kwisitayile sekhitshi yokukunceda uthathe isigqibo sokuba ukulula kwabo okumangalisayo kulungele na ikhaya lakho. (Eli galari liyinxalenye yesikhokelo sethu esikhulu Izitayile zekhabhinethi yasekhitshini ibekwe apha)
Uyilo lwekhitshi loMenzi ngokubanzi luhlelwa phantsi kwesimbo sendabuko kwaye ihlala ibonakala kumakhaya elizwe, kwii-bungalows nakwizindlu zaseMelika. Nangona kunjalo, kulula kwayo, ubuhle beklasikhi kunye nokunyaniseka kwenza ukuba ikulungele noseto lwangoku.
Eyona nto inomtsalane kwiikhitshi zesitayile soMsebenzi ziikhabhathi zayo ezintle zamaplanga. Ngokubanzi, iikhabhathi zesitayile sekhitshi sezinto ezithandwayo zisebenza ngobuninzi bazo. Ukubeka ugxininiso ekusebenzeni ngaphezulu kokuhombisa, iikhabhathi zesitayile sekhitshi zilawulwa yimigaqo emithathu yoyilo: imigca ecocekileyo, umhombiso omncinci kunye nolwakhiwo lomgangatho ophezulu. Ngaphandle kokusebenziseka kwendalo, iikhabhathi zesitayile segcisa laye laziwa kwindawo yoyilo lwasekhaya loyilo olunomtsalane kunye nolothusayo.
Nazi ezinye zeempawu ezibonakalayo zoMenzi wesitayile iikhabhathi zekhitshi:
Iimpawu zoyilo lwekhabhathi zekhitshi loMenzi
Uyilo olungqalileyo-Imigca ecocekileyo kunye neefom ezisisiseko zenza ukutyikitywa kwesitayile seKhabhinethi yesitayile sekhitshi. Iphawuleka ngoyilo lokungangxoli kwaye ilawulwa ngokulula.
Ukuhonjiswa okuncinci - Ngokungafaniyo nezitayile zekhabinethi zemveli, iikhabhathi zesitayile sezinto zobugcisa azibonisi iinkcukacha zokuhombisa ezinje ngesithsaba sokubumba, ii-cornices, i-plinths, ii-corbels okanye imilenze.
Ukusetyenziswa kwezinto zendalo ezinjengokhuni oluqinileyo oluqinileyo -Umsebenzi wekhabhathi iikhabhathi zekhitshi zithatha indalo, yiyo loo nto isebenzisa kuphela izinto zendalo ezinje ngemithi eqinileyo etyebileyo kwimibala yazo yendalo.
Iphalethi yombala osisityebi-Ngokubanzi, iikhitshi zesitayile somsebenzi zithatha ukukhuthazwa kombala kwindalo, ngenxa yoko iskimu saso sombala silawulwa ziithoni zomhlaba ezinje ngee-brown, igolide kunye nemifuno. Iikhabhathi zekhitshi lesimbo sobugcisa zihlala zishiyiwe kumbala wazo wendalo, endaweni yokuphathwa ngenye i-hue usebenzisa ipeyinti ye-opaque.
Ujoliso ekusebenzeni kunye nokwakha okuqinileyo- Ngokusebenza engqondweni, iikhikhini zesitayile sezinto ezakhiweyo zenzelwe ukulungiselela iimfuno zomsebenzisi, kunye nenjongo yokuyila uyilo oluhlala ixesha elide olunokuma kukonakala nokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Umboniso wobugcisa obuchanekileyo -Umsebenzi wekhabhathi iikhabhathi zasekhitshini zinika ugxininiso ngakumbi kubugcisa obuphezulu ngokusetyenziswa kweenkcukacha ezichanekileyo ezinje ngobuchule bokujoyina.
Ubuhle obungenasiphelo-Ngaphandle kwezibonelelo zayo ezisebenzayo, iikhabhathi zesitayile seKhitshi zinobuhle beklasikhi obunokuma kuvavanyo lwexesha.
Ikhabhathi yehardware kunye nokulungiswa kwindawo enzulu okanye emnyama - Iikhabhathi zesitayile sekhitshi zisebenzisa izinto ezitsala kunye nezibambo eziyilo ezilula. Ezi zihlala zigqityiwe kumbala onzulu okanye omnyama ukunika iikhabhathi ukuziva kwe-antique.
Eyakhelwe ngaphakathi kwifenitshala njengenxalenye yekhabhathi- Eyakhelwe ngaphakathi kwifenitshala enjengeeoks zesidlo sakusasa zihlala zibandakanywa njengenxalenye yesitayile seCraftsman ekhitshini yekhabinethi yokusebenza okuphezulu kunye nokuqaqambisa ubugcisa obuhle ngefanitshala enjengeenkcukacha. Uncedo olusebenzayo lwendawo yokuhlala eyongeziweyo kukuba isusa isidingo semingcelele eyongezelelweyo yefenitshala njengetafile kunye nezitulo ezinokuthatha indawo eyongezelelweyo ekhitshini. I-nook encinci yesidlo sakusasa ebonisa ibhentshi yomthi eqinileyo ehambelana nokwakhiwa kwitafile yokutyela isebenza njengendawo yokuhlala yokutya okuqhelekileyo kunye nokuzonwabisa nosapho okanye nabahlobo.
Izinto ezisetyenziselwa uyilo lwekhabhathi zekhitshi
Ukuhlala unyanisekile kwiingcambu zawo kunye nokunyaniseka, iikhabhathi zesitayile sekhitshi zisebenzisa kuphela izinto zendalo. Ikhabhinethi, ekubeni yeyona nto iphambili kule ndlela yasekhitshini, kufuneka yenziwe ngezinto ezinobuhle obuqaqambileyo kunye nokuqina okuphezulu. Ihlathi elityebileyo lichaza isimbo esifanelekileyo soMenzi wekhitshi ekhitshini.
Ubumnyama, iinkuni ezilukhuni zixhaphake kakhulu kwiikhabhathi zekhitshi zekhitshi loMenzi, ngokuchasene nemithi elula. Iikhabhathi zekhitshi lokwenyani zeengcibi zisebenzisa iinkuni ezinzima ezifana ne-oki, icherry, ipayini, imaple kunye nehickory.
Ikota yesarha oki zezona ntlobo zithandwa kakhulu zomthi ezisetyenziselwa uyilo lwekhabhathi zekhitshi loMenzi. Umbala wegolide oqaqambileyo kunye nembonakalo yamaqhina ibonakala ngakumbi xa isetyenziselwa ikhabhathi yekhitshi entle.
I-Oak inokuqulatha imijelo etyheli, eluhlaza kunye emnyama, ngokuxhomekeke kwiidipozithi ezikhoyo kwiinkuni. I-oki emhlophe kunye ne-oak ebomvu inokusetyenziselwa zombini iikhabhathi zekhitshi lobugcisa. I-oki ebomvu inombala ofudumeleyo onombala ophantsi obomvu, otyheli kuyo. I-oki emhlophe, kwelinye icala, inombala wegolide ngakumbi kunye nepateni ecekeceke ngakumbi yokugaya, eyenza ukuba ibe zizinto ezityebileyo zokwenza iikhabhathi zasekhitshini zalapha. I-oki emhlophe yomelele kune-oki ebomvu, kodwa eyokuqala iyabiza,.
uyenza njani ikhekhe lomtshato
Iipayini nazo zinokungcoliswa ngombala omnyama ngenkangeleko etyebileyo. I-Pine ihlala icinezelwa ngoxinzelelo ngaphambi kokuba isetyenziselwe ukwakha ikhabinethi. Iintlobo zompayini ezisetyenziswa kakhulu kwikhabhathi yekhitshini yiphayini emhlophe yaseNtshona kunye nepine emhlophe eMpuma. Xa isetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi loMenzi wezandla, ubuhle bomthi wompayini buyaphuculwa ngokusetyenziswa kwamabala acacileyo okanye amnyama.
Umthi weCherry ngumhlathanaer oyithandayo yeengcibi zeekhitshi zesitayile segcisa. ICherry inombala omdaka onzulu wendalo kunye nesandi esiphantsi esibomvu. Yipateni entle yegraining kunye nombala osisityebi unegalelo kubukeka obutofotofo kunye nobuhle beeseto zasekhitshini zemveli. Ukusukela ukuba iikhabhathi zekhitshi lobugcisa zenzelwe ukuba zihlale iminyaka, iinkuni zeCherry zenza ukhetho olugqibeleleyo, njengoko ludala ngobunono kwaye lutshintsha lube yimibala eyahlukeneyo ngokuhamba kwexesha. Umthi weCherry nawo womelele kakhulu kwaye unokuma kukonakala kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla.
Ngaphandle kwepine kunye necherry, imephu yenye yezona zinto zigqibeleleyo zesitayile somsebenzi iikhabhathi zekhitshi. Imephu inembonakalo egudileyo nengafaniyo egxunyekwe yipateni entle yokugaya. Imephu ngumthi ombala okhanyayo, kwaye iithoni zawo zisukela kumhlophe okhilimu ukuya kumbala obomvu. Xa igqityiwe ngombala ocacileyo, umbala wayo omhlophe ocacileyo uyabonakala, nangona kunjalo inokuthi inyangwe ngayo nayiphi na imibala enombala njengoko yamkela igqityiwe kakuhle.
Ezi mithi zihlala ziphathwa ngengubo yebala ecacileyo ukuphucula ipateni yazo yendalo okanye kungenjalo, zinombala omnyama ukuvelisa ukujonga okutyebileyo kunye nokunethezeka.
Kugqitywa kuyilo lwekhabhathi zekhitshi loMenzi
Uhlobo lwekhabhathi lweekhitshi zasekhitshini nalo lubeka ugxininiso kubuhle bendalo beenkuni. Endaweni yokugubungela idyasi yepeyinti yokuhombisa, ikhabethe yokhuni ihlala iphuculwa ngokugqitywa okubonisa ipateni yabo yendalo ngakumbi. Uhlobo lwekhabhathi lweekhitshi zasekhitshini nazo zinokushiywa zingapeyintwanga, zingagqitywanga okanye ziyinyani kwimeko yazo yendalo, zivumela ubuhle bazo obuqaqambileyo ukuba buvelele, ngelixa zinika ikhitshi imvakalelo engaphezulu. Okanye kungenjalo, inokubekwa ngombala onzulu webala lokujonga okuqaqambileyo, okufudumeleyo.
Ibala -Ayikho enye indlela yokugqiba enokubukhulisa ubuhle beenkuni zokwenyani ngaphandle kokubala. Ukugcina ubuchule bokugqibezela obusetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi loMenzi. Yinkqubo ebandakanya ukusetyenziswa kwengubo enemibala exutywe nearhente yokugqiba enje nge-shellac, i-lacquer, ivanishi okanye i-polyurethane, ukulungiselela ukonyusa umbala wendalo wokhuni. Obu buchule benza ukuba ipateni yokugawulwa kwemithi ibalasele kwaye inike iikhabhathi zekhitshi imbonakalo yokwenyani, eyakhiwe ngesandla yekhabhathi yomthi eqinileyo. Amaqhina kunye neenkozo zomthi zihlala zifunxa ibala elingaphezulu, zibashiye ngombala oqaqambe ngakumbi kunye nembonakalo eqaqambileyo.Amabala ezinto ezilula kulula ukuzisebenzisa, zifuna isiziba selaphu kunye nendlela elula yokuhlikihla izandla. Kuyabiza kakhulu xa kuthelekiswa nezinye izinto ezigqityiweyo.
Ukupeyinta -Ukuthelekisa ukubala, ukupeyinta kunqabile ukuba kusetyenziswe njengokugqibezela iikhabhathi zekhitshi lobugcisa. Njengoko sele kukhankanyiwe, ukutyikitywa kwesitayile seKhabhinethi yesitayile sekhitshi zizityebi, zimnyama kwaye zinzima imithi, kwaye unale nto engqondweni, akukho mfuneko yokufihla ipateni yendalo yokugawula iinkuni okanye ukubaphatha ngomnye umbala. Nangona kunjalo, kwabo bangabukhethiyo ubutyebi bemithi eqinileyo, ukupeyinta lukhetho olufanelekileyo.
Ipeyinti emhlophe inokusetyenziselwa isitayile somsebenzi Iikhabhathi zekhitshi. Ngokuchasene nobunzima kunye nesibheno esothusayo sekhabhathi yeplanga etyebileyo, iikhabhathi ezimhlophe zesitayile seCrafti zikhanya ngakumbi, ziqaqambile kwaye zinomoya. Xa usebenzisa ipeyinti emhlophe, qiniseka ukugcina ezinye izinto zoyilo kumbala wazo wendalo ukuze ugcine i-aesthetics ngokuhambelana nesitayile sokwenene seGcisa. Ngaphandle kokumhlophe, ukhilimu kunye ne-beige kunokusetyenziswa njengenye indlela emhlophe.
Ipeyinti ikwasetyenziselwa ukudala isiqithi esahlukileyo kwiiKhabinethi zesitayile sekhitshi. Lo mgaqo uyilo uthandwa kakhulu likhitshi loMenzi wezinto njengoko uzisa ubunzulu, ubukhulu kunye nokungafani nendawo, ngelixa uphula ubukrakra kunye nobunzima bekhabhathi ezipheleleyo zekhitshi. Xa ukhetha umbala wepeyinti kwisiqithi esahlukileyo ekhitshini yesitayile somsebenzi, khetha ii-hues ezithulisiweyo ezinje nge-olive green, grey okanye taupe.
Ukugqitywa kweShellac -I-Shellac lolunye uhlobo lwearhente yokugqiba enokusetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi lobugcisa. Nangona ingathandwa kangako xa kuthelekiswa namabala eenkuni, i-shellac inokukunceda ukuzisa ubuhle bendalo beenkuni, ngelixa ibanika ukhuseleko olunokuhlala iminyaka. Ukugqitywa kweShellac bekusetyenziswa ngabenzi bemithi ukusukela ekuqaleni kweminyaka yoo-1800.
I-Shellac inemvelaphi enomdla kakhulu, njengoko ithathwa kwizinambuzane ezibizwa ngokuba zi-lac bugs ezizalelwe e-India nase-Thailand. Olu luhlobo lwentlaka, olufihlwa zizinambuzane luze lukhutshwe kumaxolo emithi. Intlanzi eziqokelelweyo ziyalungiswa zize zithengiswe njengeeflakes ezomileyo ezinombala omdaka ngokukhanyayo ukuya kuorenji ngombala.
I-Shellac esetyenziselwa ukusebenza kweenkuni sele ichithakele kwaye ixutywe notywala ukuyenza icace ngakumbi kwaye isebenze. Ngokwesiqhelo, abenzi bemithi basebenzisa umxube weepawundi zeeflacac flakes kw galoni nganye yotywala. I-Shellac kule fomu inokuthengwa kwiivenkile zokuphucula ikhaya.
I-Shellac inokusetyenziselwa ukutywina ikhabethe ngaphambi kokufakwa kwebala leenkuni, okanye inokudityaniswa nemibala ukunika ukhuni ukujonga okwahluke ngokupheleleyo. Abasebenza ngomthi basebenzisa i-shellac besebenzisa iindlela ezimbini, ezizezi, ukugoba nokuxubha. Ukuxubha i-shellac kuthatha ixesha elide, nditsho nokubetha kusetyenziswa i-china bristle brush. I-padding, kwelinye icala, isebenzisa ilaphu eliphakathi lesisindo somqhaphu ukufaka imivumbo emide, emide phezu komthi. Inkqubo yokubopha ngamanye amaxesha inokufuna uhlobo lwesithambisi, njengeoyile yezimbiwa, ukuqinisekisa inkqubo yokuhambisa ngokugudileyo. Ioyile yezimbiwa ayizukuchaphazela umbala weekhabhathi. Inkqubo yokugqibela yengubo ye-shellac is sanding. Xa kuthelekiswa nezinye izinto ezigqityiweyo, i-shellac yoma ngokukhawuleza yiyo loo nto ifuna ukuba inyanzeliswe kwaye ikwenze nesicelo sokuphepha iindawo ezinamabala.
Isiphumo sokugqibela sokusetyenziswa ngokuthe ngqo kweqokobhe lekhabhathi yiplanga yindawo ephezulu ebengezelayo. Kodwa i-sheen inokuncitshiswa ngokubetha. Ukugqitywa kwe-satin ngakumbi kunokufezekiswa kusetyenziswa uboya bentsimbi kunye ne-non silicone esekwe kwi-wax.
Nangona kunjalo, xa ukhetha ukugqitywa kwe-shellac kwiikhabhathi zakho zekhitshi zekhitshi, kulungile ukuba uqaphele iziphene zayo. I-Shellac ayinakuma emanzini kunye nobushushu. Xa ivezwe emanzini, iba buthuntu kwaye inokukhula ibe namabala amhlophe ekuhambeni kwexesha. Nangona kunjalo, ukulungiswa kunokuba lula njengoko iindawo zamanzi zinokulungiswa ngokuhlikihla utywala ngephedi.
Ngaphandle kwamabala emithi, ezinye iidyasi eziphezulu ezinokusetyenziselwa ukuphucula ubuhle bendalo bomthi oqinileyo Umenzi wesitayile iikhabhathi zasekhitshini zi-varnishing. Nangona kunjalo, oku kugqitywa kudala ubukhazikhazi obukhanyayo kunye nokuqaqamba kwaye kukhethwe kancinci kwisitayile sekhitshi loMenzi.
Imibala yoyilo lwekhabhathi yasekhitshini
Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi lwekhitshi luphawulwa ngemibala yazo eyomeleleyo, enzulu enika ukuziva okutyebileyo kwisithuba. Uhlobo lweGcisa luthabathela kwindalo kwaye umbala walo wombala ulawulwa ziitoni ezingathathi hlangothi kunye nemibala yomhlaba. Izikimu zemibala eqhelekileyo zibandakanya imibala yee-browns kunye neetani kunye nee-shades eziluhlaza njengezityebile zemoss okanye imifuno yehlathi. Eminye imibala ethandwayo yesitayile zizityebi zobusi, iigolide, umhlwa kunye neeorenji ezinzulu.
Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi lwekhitshi nazo zingaboleka imvakalelo ye-antique ekhitshini, kwaye ngenxa yesi sizathu zihlala zisetyenziswa ngemibala etyebileyo. Obu butyebi obuhlukileyo kunye nomxholo ophefumlelweyo wendalo uboniswa ngokusetyenziswa okuphezulu kwekhabhathi yokhuni kwimibala yendalo emdaka. Enye into enokwenziwa ngohlobo lweKhabinethi yohlobo lwekhitshi imibala emhlophe, emhlophe emhlophe, cream, brown brown, tans, grays, rust colors and shades of green.
Ezona nkcukacha ziqhelekileyo zisetyenzisiweyo kuyilo lwekhabhathi zekhitshi loMenzi
Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi lwekhitshi alubeki kugxininiso okanye ukuhombisa kwaye luthanda ukusebenza kunye nokwakha okuqinileyo. Esi sitayile sekhabhathi yekhitshi sihlala sibonisa iingcango ezilungiselelwe ngokulula kunye nomsebenzi olula kakhulu wesingqengqelo somthi ocacileyo ophakathi kwepaneli yekhabhinethi.
Iinkcukacha ezisemgangathweni zefanitshala zezona zinto zidibeneyo zeCraftsman yesitayile sekhitshi. Endaweni yokubonisa imifanekiso eqingqiweyo eneenkcukacha kunye nokuhonjiswa okunzulu, inento yokwenza nokudibana endaweni yoko. Ukudityaniswa kweenkuni luphawu lobugcisa bekhabhathi. Umbono osisiseko ekusebenzeni ngomthi, ubuchule bemithi yokudibanisa iinkuni busetyenziswa ziingcibi zokuncamathisela izinto zekhabinethi okanye zefanitshala kunye ngaphandle kokusebenzisa iinzipho okanye izikrufu. Iziqwenga zomthi zihlala zisikwa ngendlela ethile, ukuze zilungelane, emva koko zomelezwe ngohlobo lwe-binder okanye i-adhesive. Ngaphandle kokuvelisa ukubonakala okucocekileyo nokufanayo, ubuchwephesha bokhuni beplanga bunika ikhabhathi kunye nefenitshala ukongeza amandla, ukuzinza kunye nokuqina.
Ikhitshi lokwenyani lobuchwephesha libandakanya ubuchwephesha bobuchwephesha bokhuni. Zininzi iintlobo zamalungu adibeneyo ezisetyenziselwa isitayile somsebenzi wekhitshi iikhabhathi ukubanika ukwakha okuqinileyo. Apha ngezantsi kukho umzekelo wezinto zokudibanisa iinkuni eziqhelekileyo ezisetyenzisiweyo kwisitayile seKhabinethi yokhitshi yoyilo.
Iindidi zokudibanisa iinkuni kuyilo lweKhitshi yoyilo lekhitshi loMenzi
Iindibano zeDovetail - Udibaniso lweDovetail lusetyenziselwa ukudibanisa iziphelo zeebhodi ezimbini kunye kwikona elungileyo. Amalungu e-Dovetail aneminwe edityanisiweyo ngokusikeka kwidayalonal. Le minwe inemilo yetrapezoidal efana nemisila yehobe, yiyo loo nto imvelaphi yegama labo. Uthotho lwezikhonkwane luyanqunyulwa ukunweba ukusuka esiphelweni seebhodi, ezifakwe phakathi kwezithuba zenye ibhodi, ukunxibelelana nemisila.
Phakathi kweentlobo zamalungu asebenza ngamaplanga, amajoyina e-dovetail lolona hlobo lomeleleyo lusetyenziswa ekwenziweni kwekhabhinethi. Amalungu edovetail aqhele ukwakhiwa ekwakheni iibhokisi zedrowa, ngakumbi ukujoyina iidrowa macala ngaphambili. Ayifuni naziphi na izinto zokubopha ngoomatshini kwaye iqinisekisa ulingano oluqinileyo phakathi kwezinto zedrowa. Umdibaniso we-dovetail uhlala ubhekiswa kumdibaniso we-fantail okanye umdibaniso womsila wokugwinya kwaye unokwahluka okuninzi njenge-dovetail, i-dovetail yesiqingatha semfama, i-dovetail eyimfihlakalo, i-dovetail efihliweyo ephindwe kabini kunye ne-sliding dovetail.
Mortise kunye neTenon Joints - Imali yokubambisa kunye neetonon ziyaziwa ngamandla abo aphezulu, ezenza ukuba ibe lelinye lawona malungu mabalaseleyo kwikhabhathi nasekwenzeni ifanitshala. Iimbumba kunye ne-tenon ngokudibeneyo kubandakanya ibhodi enye ene-stub okanye i-tenon kunye nenye ibhodi esike umngxunya obizwa ngokuba yi-mortise. Ukudibanisa iinkuni ezimbini kunye, i-tenon ifakwe kwi-mortise, idibanisa kwi-angle ye-90 degree. Umdibaniso unokuqiniswa ngokudibanisa, iglu, ipini okanye i-wedge ukuyikhusela endaweni yayo ngcono.
Ukudityaniswa kokubola kweetoni kuluphawu lwentengiso lwefenitshala yesitayile soMsebenzi, nangona kunjalo zikwasetyenziselwa isitayile seMisebenzi iikhabhathi zasekhitshini. Nangona zihlala zisetyenziselwa ukujoyina amalungu amakhulu efanitshala kunye nezitulo ezinjengezitulo zendlela, i-stretcher ukuya kwiirayile okanye i-slats ukuya kwi-rails, i-mortise kunye ne-tenon joints ziqeshwe ngokwesiko ukuze zinamathele izakhelo kunye neepaneli kunye kwikhabhathi. I-Mortise kunye ne-tenon ngokudibeneyo zilula kakhulu, kodwa zingqinekile ukuba zomelele.
I-Mortise kunye ne-tenon ngokudibeneyo zinokwahluka okwahlukileyo njengokhiye, imfama, ithotyelwe kwaye idilizwe. I-mortise kunye neetonons zithatha iimilo ezahlukeneyo, ngokwahlukeneyo. I-Mortise ineentlobo ezahlukeneyo ezifana ne-mortise evulekileyo, i-stub mortise, ngokusebenzisa i-mortise, ngokusebenzisa i-dovetails yesiqingatha kunye ne-dovetail yesiqingatha. Ngelixa iintlobo zeetoni ziyi-stub tenon, nge-tenon, i-tenon evulekileyo, i-pegged tenon, i-biscuit tenon, i-tusk tenon, i-tenon ephezulu, i-tenon ehlekisayo, i-hammer ekhokele i-tenon kunye ne-half tenon tenon.
Amalungu eqhina - Olona lwenzi lusisiseko lusebenza ngokudityaniswa komthi. Ukudityaniswa kwamanqatha zizinto nje ezimbini zomthi ezidityanisiweyo eziphelweni, zihlala zikwindawo eneringi, ngaphandle kokwenza ubume okhethekileyo okanye ukusika ngaphandle komthi obandakanyekayo. Njengoko igama libonisa, iziqwenga zomthi zityhutyha nje enye kwenye okanye kwindawo engqameko. Nangona kuyinto elula ukuyakha, ithathwa njengeyona ibuthathaka kuzo zonke iindlela zokudibanisa iinkuni. Njengokuqiniswa, izinto zokubopha, izikhonkwane, izikrufu okanye iidowels Ngokwakhiwa kwekhabhathi yekhitshi, amalungu adibeneyo asetyenziselwa iifreyimu ezine zebhokisi kunye neebhokisi.
Amalungu e-Dowel aqiniswe ngokudibeneyo yindlela eqhelekileyo esetyenziselwa ukwakha iikhabhathi zekhitshi loMenzi. Kule nguquko, ukudityaniswa kwe-butt kudibanisa idowel ebekwe phakathi kwamalungu eenkuni Oku kuhlala kusetyenziselwa isidumbu sekhabhathi kunye nokwakhiwa kwesakhelo. Ezinye iindidi zamalungu eziqinisiwe zizihlanganisi ezihlanganisiweyo, amaqebengwana eebhasikithi aqinisiwe, amalunga ombindi anezikrufu zemingxunya epokothweni kunye namalungu abethelelwe abethelelwe.
Amalungu eDowel - Amalungu edowel adibanisa iinkuni ezimbini kusetyenziswa iidowels okanye izikhonkwane ezifakwe kwimithi enemingxunya. Imingxunya eyombiweyo ibamba izikhonkwane kwaye iqinisekise ukudityaniswa okuqinileyo. Ii-Dowels zinokusetyenziswa kunye nezinye iintlobo zamalungu asebenza ngomthi ukomeleza amandla abo. Ezi ntambo zifakwa phakathi kweenkuni, zisebenza ngendlela efanayo yesikhonkwane.
Obu buchule bokudibanisa iinkuni kubandakanya ukubhola uthotho lwemingxunya kumphezulu welungu ngalinye lomthi. Imingxunya igrunjwe kusetyenziswa i-dowelling jig ukuqinisekisa ukubekwa kwayo ngokuchanekileyo kunye nobungakanani obuchanekileyo. Ukubekwa ngqo kwemingxunya kubaluleke kakhulu kule ndlela yokudibanisa ukuze kuqinisekiswe ukuba amalungu omthi ahlanganiswe ngokugqibeleleyo. Iidowels zifakwa kweminye imingxunya kwaye zibotshelelwe ngeglu.
Amalungu edowel omelele kakhulu kunamalungu we-butt.Nangona kunjalo, azomelele njengendibaniselwano yehobe. Ziqhelekile kwisakhelo nakwizidumbu zokwakha, kodwa azikhuthazwanga ngefanitshala ekumgangatho ophezulu. Ukudityaniswa kwedowel kunokusetyenziselwa ukudibanisa isakhelo sobuso, ukwakhiwa kwesidumbu kwikhabhinethi ngokukodwa ukujoyina amacala omzimba ukuya phezulu nasezantsi, ukulungiselela indawo yokuhlala esisigxina kunye nezahlulo zekhabhinethi yangaphakathi.
Amalungu adibeneyo - Ikwabizwa ngokuba ziimitha, amalungu adityanisiweyo ayafana nokudityaniswa kwe-butt, kodwa endaweni yokusikwa ngokuthe tye, amalungu omthi abethelwa kwi-angle ye-45 degree. Amalungu omthi adityanisiwe ukwenza ikona, okukhokelela kwi-90 degree angle. Amalungu emitha ngokwawo anokuba buthathaka, kodwa anokuqiniswa kukusetyenziswa kweentonga.
Amalungu adibeneyo avelisa umphezulu omnandi kuba awubonisi nasiphi na isiphelo sengqolowa xa kuthelekiswa nomdibaniso wempundu. Iziphumo zizonke kukujonga okugungxulweyo. Amalungu adibeneyo asetyenziselwa ulwakhiwo lwesakhelo.
Amalungu epokotho - Ukudityaniswa kwepokotho kwakhiwa ngokusika islot kunye nokumba kwangaphambili umngxuma wokulinga kwi-engile, iidigri ezili-15, phakathi kwamalungu amabini omthi. Elinye lala malungu lidityaniswe nelinye ngesikisi sokubamba. Iglu okanye naluphi na uhlobo lokuncamathela aluyomfuneko kolu hlobo lwendibaniselwano yeenkuni kuba izikrufu zisebenza njengezibopho zangaphakathi.
Amalungu epokotho aqhele ukusetyenziswa kwizakhelo zobuso bekhabhinethi. Le ndlela yokujoyina iinkuni yomelele kakhulu kwaye inokusetyenziselwa usetyenziso olufanayo olufuna amandla amaninzi. Olunye usebenziso lwendibaniselwano yeepokotho ziifaskoti, iikona zekhabethe ezijijelweyo kunye neejika, imingxunya yeebhendi, iikhabhathi zekhitshi ezingenazingubo, izakhelo zobuso, izakhelo zekhabinethi kunye nesidumbu.
Ezinye iintlobo - Olunye uhlobo lweendlela zokudibanisa iinkuni ezisetyenziselwa isakhelo seKhabinethi yesitayile sekhitshi kunye nokwakhiwa kwesidumbu ngamalungu e-dado, amalungu e-rabbet, amalunga e-biscuit, amalungu ebhokisi kunye namalungu omnwe.
Okukhankanywe ngaphambili, isitayile seKhitshi iikhabhathi zekhitshi zigxila ngakumbi ekusebenzeni endaweni yokuhombisa, yiyo loo nto isiphumo siyilo olucacileyo nolulula lomnyango wekhabhathi. Iikhabhathi zekhitshi zekhitshi lobuchwephesha zibonisa izinto ezisisiseko zobugcisa ezinje ngesikwere okanye imiphetho ethe nkqo. Eminye imizekelo yoyilo olucwangcisiweyo lwekhitshi lekhitshi elisetyenziselwa isitayile soMsebenzi ziingcango zepaneli ezicabaleleyo, iingcango zephaneli ezivalekileyo okanye iingcango zeglasi ezilungiselelweyo ezilula. Ngamanye amaxesha, iingcango zeglasi ezikhokelwayo ziyasetyenziswa.
Iingcango zepaneli eflethi - Iingcango zepaneli ezineflethi zinoyilo olucocekileyo nolungafakwanga. Olu luyilo lomnyango wekhabhinethi lubonakaliswe yiphaneli yeziko ethe tyaba, endaweni yokuphakanyiswa, ukurhoxa okanye ukujikwa. Inika ukucoceka nokucoceka kokuziva kwiikhabhathi zesitayile sekhitshi kwaye inokusetyenziselwa useto lwasekhaya, olutshintsho kunye nolwanamhlanje. Iingcango zepaneli eflethi zisebenza ngokugqibeleleyo kwisitayile seKhabhinethi yokhitshi ngenxa yokulula kwazo, imigca echaziweyo kunye ne-aesthetics encinci.
indlela yokwenza isaphetha ngebhanti enentambo
Iingcango zephaneli ezivalekileyo -Iingcango zephaneli ezingena ngaphakathi nazo zihlala zisetyenziselwa iikhabhathi zekhitshi lobugcisa. Xa kuthelekiswa neengcango zephaneli eziphakanyisiweyo ezifanelekileyo izitayile zasekhitshini zemveli, iingcango zephaneli ezivalelweyo azihonjiswanga kangako. Olu hlobo loyilo lomnyango wekhabhathi yekhitshi linepaneli yeziko elingaphantsi kancinci kwezinye izinto zekhabinethi yekhitshi. Uyilo oludumileyo lweShaker yoyilo lwekhitshi yohlobo lwecango lepaneli elingaphakathi.
Iingcango zepaneli eziphakanyisiweyo -Ukuphakamisa iingcango zekhabethe yecandelo eliphambili lomnyango kuphakanyiswe kancinci ukudala umlinganiso owongezelelweyo. Ayizizo zonke iingcango zephaneli eziphakanyisiweyo ezifanayo kunye nezinye ezinesakhelo esilula ngelixa abanye benokunikezela uyilo olwenziweyo. Iikhabhathi eziphakanyisiweyo zepaneli zilungele ukuqaqambisa iimpawu ezizodwa zengqolowa yeenkuni kunye nombala wayo.
Iingcango zesitayile esi-Shaker - Iingcango zekhabinethi yesitayile seShaker ziyinto eyaziwayo yokuyilwa komnyango wekhitshi efumaneka ngokufuthi kutshintsho lwangoku, lwangoku kunye nolwakhiwo lwasekhitshini lwendabuko, ezinje ngesitayile seCraftsman. Ngokwenkcazo, iingcango zekhabinethi yesitayile seShaker ziingcango ezintlanu ezineepaneli eziyekisiweyo. Umnyango wekhabhathi yesitayile seShaker ikwabonakaliswa yinto elula, esebenzayo. Ukufakela uphawu oluphambili lwesitayile sekhitshi ekhitshini, iingcango zesitayile sekhitshi yesitayile se-Shaker zinoyilo olusebenzisekayo olusebenzisa ukusetyenziswa kwemihombiso enzima.
Iingcango zekhabhinethi ezivakalayo -Ukongeza inqaku elongezelelekileyo kwisitayile seKhabethe yekhitshi, iingcango zeakhawunti zibandakanyiwe kuyilo lwayo. Ezi ziingcango zekhabhinethi ezinokufakwa kweglasi kuyilo lwesimbo se-mullion okanye kuyilo olunye lwepaneli. Iingcango zeAccent yindlela entle yokuphelisa ubunzima bezityebi, iikhabhathi zekhitshi. Ukongeza kubuhle, zikwabonelela ngeenzuzo ezibonakalayo njengoko imixholo yeekhabhathi ibonakala ngakumbi.
Iingcango zekhabhinethi ezingenasiphelo -Ukwakha ngobulumko, isitayile sekhabhathi iikhabhathi zasekhitshini nazo zinokungabi nasiseko. IKhabinethi engenazinikezelo inikezela ngokusebenza okungcono kunye nobuhle obuhle ngakumbi xa kuthelekiswa nekhabhathi ezifreyimuweyo. Ikhabhathi engenachaphaza, njengoko igama lisitsho, ayinaso isakhelo sobuso esiqhotyoshelwe ngaphambili kwebhokisi yekhabinethi. Ngamanye amaxesha bathunyelwa kwikhabhathi epheleleyo yokufikelela njengoko bephucula ukufikelela kwiikhabhathi zasekhitshini. Ukongeza, baphucula ubungakanani bokugcina kweedrowa kuba indawo igcinwa ngokungabinazo izakhelo zobuso. Ulwakhiwo olungenasiphelo lukwanika nekhabhathi yekhitshi ukongeza amandla kunye nozinzo, kuba ibhokisi yekhabinethi okanye isidumbu sijiyile. Ngokwendlela yoyilo, iikhabhathi ezingenasiphelo zinobuhle obulula obuhambelana neemfuno zoyilo lweekhabhathi zekhitshi.
Ubuncwane bekhabhathi yokhuni enzulu, efudumeleyo yenza isiseko sekhitshi yesitayile esimangalisayo. Kodwa ayinguye wonke umntu okhetha oku kujongeka kuba imithi enemibala emnyama inokuba nzima emehlweni, ngakumbi xa isetyenziswa kakhulu kwisithuba. Indlela elungileyo yokuthomalalisa ubunzima besitayile seKhabhinethi yokhitshi kukuyipeyinta ngombala ongathathi hlangothi endaweni yebala. Kwaye eyona ndlela ithandwayo kwiikhabhathi zemibala ezinemibala ziikhabhathi ezimhlophe. Ukutshintsha umbala weekhabhathi ukusuka kumbala wendalo ukuya kumbala omhlophe kulungile iesile njengoko iinkcukacha zoyilo lwekhabhathi yekhitshi kunye nezinye izinto ekhitshini zisahambelana nesimbo seGcisa.
Ingcibi yekhitshi eneekhitshi ezimhlophe zasekhitshini zilula ngakumbi emehlweni kwaye zibonelela ngokukhanya okukhanyayo kunye nokuqaqamba. Xa kuthelekiswa nomnyama, isityebi somthi iikhabhathi zelizwe zasekhitshini , Iikhabhathi ezimhlophe zineetoni ezininzi kwaye zibuyise umva. Ikhabhathi emhlophe ikwabonisa ukukhanya kwendalo ngcono, kungoko indawo ijongeka ikhanya ngakumbi.
Uhlobo lwekhabhathi lwekhitshi emhlophe lusebenza ngokukodwa kwiikhitshi ezincinci. Ikhabhathi emnyama enombala omdaka inomkhwa wokwenza indawo izive icinekile ngakumbi kwiikhabhathi ezimhlophe zekhitshi ezimhlophe zenza ingcinga yendawo enkulu.
Olunye uncedo lwekhabhathi emhlophe yesitayile sekhitshi kukuba zixhaphake kakhulu kwaye ziyaguquguquka xa kuziwa kuyilo. Inika iyantlukwano xa kuziwa ekudibaniseni kunye nokugqitywa okwahlukileyo komgangatho, udonga, umhombiso, ifanitshala kunye nempahla. Ikuvumela ukuba usebenze ngeendlela ezininzi zokwenza imiphezulu yeetafile kwaye ujonge ubutofotofo xa ubhangqiwe ngee-countertops zamatye endalo. Indawo yangasemva engathathi hlangothi ikwadala imeko eguqukayo yokwazisa ukukhanya kombala kuyo yonke iphalethi yakho - njengezinto zokukhanya ezinombala omnyama, ubugcisa bethayile yobugcisa, udonga olumbala womhlaba kunye nomgangatho wokhuni, konke oku kufana nekhitshi yesitayile sokwenene.
Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zikwanikezela ngendlela efanelekileyo yokunika ikhitshi yesitayile seGcisa ukubukeka okutsha. Ayikhe iphume ngesitayile kwaye ithathwa njengombala ongapheliyo ebonisa ukuba lukhetho lweklasikhi olunokuma kuvavanyo lwexesha.
Xa usebenzisa ipeyinti emhlophe kwiikhabhathi zekhitshi loMenzi wezandla, khetha iithowuni ezinencasa ezinje ngee beige okanye ezimhlophe. Iimpawu ezimhlophe ezimhlophe zilungele ngakumbi useto lwala maxesha. Ngokwekhabhathi yentsimbi yekhabhathi, iikhabhathi zesitayile esimhlophe sezinto zekhitshi zibhangqwe kakuhle ngokutsalwa ngombala omnyama, amaqhina kunye neziphatho njengoko zizisa umdla obonwayo kwisithuba sisebenzisa umahluko.
Isitayile sobuchwephesha sinika eyaso eyokuchukumisa eyahlukileyo nkqu neenkcukacha ezincinci zoyilo lwekhitshi. Ukuhambelana nemigaqo ephambili yoyilo lwekhitshi lokwenyani loMenzi wezandla, uMenzi wesitayile sekhitshi yehardware ineempawu ezintathu ezisisiseko: (1) ukusebenza, (2) ifom yokwakha eyomeleleyo kunye (3) nesiphelo esinzulu okanye esifudumeleyo.
Iikhabhathi zekhitshi lobugcisa ezilungiselelwe ukusebenza ngokupheleleyo kunye nokufikeleleka okuphezulu. Ngale nto engqondweni, isitayile sekhitshi lekhitshi lekhabhathi yentsimbi zihlala zikhulu kwaye kulula ukuzibamba. Ngokubanzi, abanalo uyilo lwee-frills ekulula ukuzenza. Abanayo imihombiso eyongezelelweyo enokuthi iphazamise izixhobo zekhabethe ngokwazo.
Xa kuziwa kuyilo, izixhobo zekhabethe zekhompyuter zihlala zinendlela eyomeleleyo yoyilo kunye nemigca echaziweyo. Xa kuthelekiswa nolunye uhlobo lwekhabhathi yesixhobo sekhabhathi, ezihombisayo, isitayile seKhitshi sekhabhathi yentsimbi azinazo iinkcukacha ezithe kratya ezinjengokukrola okuntsonkothileyo okanye iipleyiti zangasemva ezihonjiswe ngokugqithileyo, nangona kunjalo zisenokuba nokuhonjiswa okuncinci njengemigca elula yejometri kunye neemilo.
Eminye imizekelo yeentlobo zeekhompyuter zekhompyuter ezilungele kakuhle isitayile soMsebenzi ziintambo ezitsaliweyo, izibambo zekhabinethi ezinqamlezileyo, umgqomo wokutsala kunye neenqanawa. Igcisa elenziwe ngobugcisa nalo lisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kolu hlobo lwekhabhathi zasekhitshini.
Bona ngakumbi isitayile somsebenzi weengcibi ze-Wayfair
Nantsi inkcazo enzulu yeempawu zeentlobo ezahlukeneyo zesitayile seCrafti yekhitshi yehardware yekhabethe:
Izibambo zekhabinhun chunky kunye nolwakhiwo- IKhabinethi ilawula isitayile soMenzi wekhitshi kwiikhitshi zihlala zikhulu kwaye zinqabile njengoko kulula ukuzibamba. Isitayile sekhabhathi yekhitshi ekhitshi kunye nokuphatha zihlala zenziwe ngentsimbi, endaweni yomthi, iplastiki okanye i-ceramic. Xa kuthelekiswa nokutsalwa kwekhabinethi ekhitshini rhoqo, isitayile seKhabinethi yentsimbi eneempawu zobuhle ezibukhali kwaye imigca ichaza ngakumbi. Ngokwesiqhelo banesipleyiti esikhulu esikhulu esigxininiswe kwiimilo zejiyometri njengothotho lwezikwere ezisikiweyo kunye nesikwere esivelileyo okanye isanqana lesetyhula embindini. Ezinye zinendawo engasemva emile engunxantathu emile ngesiphatho sokulahla okanye ngokutsala okujingayo.
Olunye uyilo oludumileyo lwekhabhathi yokuphatha iikhabhathi zekhitshi loMenzi ziintsimbi ezithe tyaba, ukuwisa, ukutsala iringi kunye nokutsala kwangexesha. Ngaphandle kweemilo zoxande kunye nezikwere ezichazwe kakuhle, isitayile seKhabinethi yokuphatha iikhabhathi zinokuba nemiphetho ejikeleziweyo okanye iprofayili egobileyo.
IKhabinethi iyatsala kwaye iphathe isitayile seGcisa iikhabhathi zasekhitshini zihlala zimnyama okanye nzulu ngombala ngombala.
Indebe kunye nomgqomo wokutsala - Indebe kunye nokutsala imigqomo kufana noyilo lwekhabhinethi yemveli. Ubuhle babo obudala kunye nokuziva kweediliya kubenza babe zizixhobo ezifanelekileyo zekhabinethi yezitayile zekhitshi. Indebe kunye nemigqomo yokutsala iyaziwa ngesiqingatha senyanga okanye imilo setyhula. Olu hlobo lwesiphatho sekhabhathi yekhitshi lufakwe kwicala elivulekileyo elijonge ezantsi kwaye linokuqhutywa kuphela kwelinye icala. Iikomityi kunye nokutsalwa kwemigqomo zihlala zisetyenziselwa iidrawer endaweni yokuguqula iingcango zekhabinethi. Ngokubanzi, banikezela ngenkangeleko entsha kwikhabhinethi yemveli yokutsala kunye nokuphatha.
Iikhonkco - Iikhonkco ziluhlobo olulula lwezixhobo zekhabhathi kuba zezona kulula ukuzifaka. Zithatha iimilo ezahlukeneyo ezinjengeenxa zonke, isikwere kunye ne-oval. Iikhonkco zekhabhathi zekhitshi zasekhitshini ziqhelekile ngombala omnyama, ngaphandle kokuhonjiswa okubandakanyekileyo. Amanye amaqhina e-antique anokusetyenziselwa olu hlobo lwesitayile sekhabhathi yasekhitshini anokubandakanya iinkcukacha zokuhombisa ezinje ngemijikelezo yomda we-knob, ngelixa ezinye zinokubonisa amachaphaza amancinci okanye imigca.
Izixhobo zobugcisa -Izixhobo zeArtisan zitsalwa yikhabhinethi, izibambo kunye neenqanawa ezenziwe ngokwesiko kwaye zenziwe ngesandla. Ezi zihlala zenziwe ngesinyithi esimnyama kwaye zinokugqitywa kokuguga. Umzekelo owaziwayo wehardware yentsimbi ngumnyango wentsimbi. Ngokwembonakalo, banobuhle beklasikhi kwaye bahlala bebamnyama ngombala.
I-Hardware igqibezela indlela yoyilo lwekhabhathi yekhitshi
Inkangeleko ngokubanzi yesitayile seGcisa ikhitshi lekhabhathi yentsimbi yinto yakudala, iLizwi eliDala kunye nexesha elimisiweyo. Ngaphandle kokuba nombala onzulu kwaye ofudumeleyo, bahlala bekhangeleka bebatten okanye betyhafile.
Njengomgaqo wesithupha apha akukho nto icwebezelayo ekhitshini yesitayile soMsebenzi xa kufikwa kwimixube kunye nokugqitywa. Isitayile sezinto zobugcisa ikhitshi lekhabhathi yentsimbi inombala oqinileyo omnyama kunye nokugqiba okunzulu, okushushu. Cinga ngamaqhina, ukutsala kunye nokuphatha kugqitywe ngezinto zakudala njengoko zinganiki mvakalelo nje kuphela, kodwa zikwadibana kakuhle nekhabhathi yendalo yamaplanga. Oku kubandakanya i-bronze ye-rubbed ye-oyile, ubhedu obudala, ii-patinas ezishushu kunye ne-antique enemibala emnyama emnyama. Izixhobo zentsimbi emnyama kunye notsalo nazo ziyathandwa kwesi sitayile.
Ezinye zezinto ezigqityiweyo zokugqiba isitayile seKhabethe yekhitshi yezixhobo zekhompyuter zezi:
Mnyama - Umbala ophambili kunye nokugqitywa kwezixhobo zekhitshi lekhitshi loMenzi wezobugcisa, umnyama uzisa ingxelo eyomeleleyo kunye nokungafani ngokuqinileyo kwikhabhathi yekhitshi. Umnyama uza kugqitywa nge-matte okanye kwi-gloss kuxhomekeke kwisitayile loyilo osithandayo. Izixhobo zekhabhathi ezimnyama zasekhitshini zikwabonisa ukuziva kweediliya, kwaye zibonelela ngendlela efanelekileyo yokususa umbala weekhabhinethi ezityebileyo, ezimnyama zekhitshi.
Jonga ikhabhathi emnyama matte eboniswe apha eWayfair
ukucwangcisa uluhlu lokutshekisha iqela le-bachelorette
Endala -I-antique endala izisa neLizwe eliDala eliqinileyo kwiikhabhathi zekhitshi lobugcisa. Iphawulwa yintengiso yetshokholethi enzulu ekhethekileyo ifanelekile kuzo zombini iikhabhathi ezikhanyayo, eziphakathi nezimnyama ezenziwe ngomthi. Ukugqitywa kwe-antique endala kukwabonelela ngesibheno sexesha, esenza iikhabhathi zesitayile seKhitshi zikhangeleke zembali kunye nexesha elivavanyiweyo.
Jonga ucango lwekhabhathi ye-antique eboniswe apha eWayfair
Ibronze yaseVenice - Ibronze yaseVenice inombala omnyama kakhulu osondele kumnyama, kodwa inee-aksenti zangaphantsi zangaphantsi ezimdaka ngombala. Kumnyama kuneoyile exutywe ngebronze kunye nokudityaniswa kakuhle nobutyebi okanye ubunzulu, obunemibala efudumeleyo yobugcisa besitayile sekhitshi lekhabhathi. Ubhedu lwaseVenice lunokudityaniswa kunye neekhabhathi zomthi ezinombala okhanyayo njengemephu. Ngokubanzi, iVenetian bronze yekhabinethi yokugqiba izixhobo zongeza i-rustic vibe kwikhitshi eqinileyo yekhitshi yekhabhathi.
Ioyile eXineneyo yoBhedu I-bronze yebrashi ekhuhliweyo ifanisa ukubonakala kobhedu oludala kwaye luphawulwa ngombala omnyama kakhulu ovela kwitshokholethi enzulu ukuya kumbala omnyama ongwevu ngobhedu obuphantsi. Xa kuthelekiswa nobhedu lwaseVenetian, i-bronze ye-rubbed yobhedu ine-lighter kunye ne-matte. I-bronze yebrashi yeoyile izisa ubuqaqawuli obunobunkunkqele kwikhabhathi yekhitshi kwaye ilunge kakhulu ngokudityaniswa nekhabhathi ezimhlophe zohlobo lweMisebenzi. Olu gqibelo lusebenza kwimithi enemibala ekhanyayo njengemephu.
Jonga ucango lwebronze olucociweyo lweoyile oluboniswe apha eWayfair
Intsimbi yamandulo - Isinyithi se-antique sinombala wesilivere odibeneyo ogxininiswe ngamabala amnyama amnyama angwevu. Inkangeleko yezixhobo zekhabethe zentsimbi ze-antique zenziwe zaza zazaliswa kukungafezeki. Olunye uphawu olwahlukileyo olwenza ukugqitywa kwentsimbi ye-antique lubonakale kukuba utshintsho lwayo lombala ngokuxhomekeke kukuvezwa kukukhanya, ukuze ijongeke ibenombala omnyama okanye okhanyayo. Isinyithi se-antique sigqibelele isitayile somsebenzi iikhabhathi zekhitshi kuba zenza ibhalansi kunye nokungafani kuyilo luphela.
Ezinye iintlobo zekhabhathi yentsimbi ezigqityiweyo ezilungele isitayile sekhitshi loMenzi zenziwe ngobhedu lwe-antique, ubhedu oludala, i-antique pewter kunye nobhedu lwe-antique.
Ukugqibezela inkangeleko yakho yekhitshi loMenzi wezinto zobugcisa, bamba izixhobo zekhabhathi zentsimbi kunye neepompo ezifanayo kunye nolunye ulungiso. Gwema izixhobo zekhabhathi ezinobukhazikhazi kunye neziqaqambileyo njengoko zihlala zinxulunyaniswa nesitayile sangoku.
Intle le ikhitshi leplanga elimnyama ibonisa iikhabhathi eziphakamileyo ezithandekayo kunye neglasi yeekhabhathi ezingaphezulu kunye nesitayile se-antique sokutsala amaqhina. Indawo yotshintsho ibandakanya indawo eninzi yokutyela, isiqithi esikhulu kunye noluhlu lwamatye esiko kunye ne-alcove ye-oveni.
I-Minwax 260914444 Interior Wood Gel Sta… $ 13.57 umthengisi ogqibelele (4021) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Rust-Oleum Zinsser 408 Bulls Eye Ecacileyo yeShel… $ 15.99 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-1122 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
IKreg Zinc SML-C125-250 1-1 / 4 'Irhabaxa iTr… $ 10.28$ 13.49 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-2653 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Hearth Creek 12 'Rustic Black Barn Door H… $ 39.95 umthengisi ogqibelele (87) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Ixabiso eliphakathi leentyatyambo emtshatweni
Iindwendwe zomtshato zasehlotyeni zinxiba u-2018
ikowuti entle yomhlobo
isitokhwe esihle somfazi
iingoma zothando zamakristu zemitshato
Isithembiso sesafire simenzela amakhonkco
yeyiphi intyatyambo yomtshato ethandwa kakhulu?